कसरी हुन्छ हृदयघात ? हृदयघातबाट बच्न कुन तेल खाने ? थाहापाउनुहोस् - ज्ञानविज्ञान
कसरी हुन्छ हृदयघात ? हृदयघातबाट बच्न कुन तेल खाने ? थाहापाउनुहोस्
हृदयघात र पक्षघात जस्ता मुटुको रोगलाई विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक रोग मानिन्छ, जसले विश्वव्यापी वर्षेनी १ करोड ७५ लाख मानिसहरूको ज्यान लिने गर्दछ। तरपनि मानिसहरू हेलचेक्र्याईँ गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको खाने बानी र तरिकाले गर्दा जानी-नजानी मुटुरोगको शिकार बन्न पुगिरहेका हुन्छन्।
मुटुरोग विशेषज्ञका अनुसार हामीले तेलको प्रयोग गर्दा धेरै गल्तीहरू गरिरहेका हुन्छौँ।विशेष गरी हामीले खाने तेलको प्रकार र यसलाई पकाउने तरिकाले हाम्रो मुटुको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।
कुन तेलको प्रयोग सबैभन्दा उचित हुन्छ?
चिकित्सकहरुका अनुसार हाम्रो खानामा कम्तीमा पनि १५ देखि ३० प्रतिशत बोसो अथवा चिल्लो पदार्थ हुनुपर्दछ।
सबैले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा, सबै तेलहरू उच्च-तापक्रममा पकाउनको लागि उपयुक्त हुँदैनन्। जस्तै जैतूनको तेल (Olive Oil) प्रयोग गरेर धेरै फ्राइ गर्नुपर्ने खानाहरू (समोसा, पकौडा, पुरी) पकाउनुहुँदैन। यसको मूख्य कारण भनेको यस्ता तेलहरूलाई उच्च-तापक्रममा तताउँदा यसमा भएका पौष्टिक तत्वहरू नाश भएर जान्छन् र हानीकारक तत्वहरू पैदा हुन्छन्। तथापी, सलादजस्ता तताउन नपर्ने खानाहरूलाई भिजाउनको लागि यो जैतूनको तेल प्रयोग गर्दा यसले हाम्रो मुटुलाई बचाउन मूख्य भूमिका खेल्दछ।
त्यसैगरी, सूर्यमुखी तेल, नरिवलको तेल र तोरीको तेलसँग धेरै तापक्रम सहन सक्ने क्षमता हुने हुनाले धेरै फ्राइ गर्नको लागि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले, जस्तो खाना पकाउनुपर्ने हो, त्यस्तै प्रकारको तेलको प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन जान्छ, हैन भने त्यसले फाइदाको सट्टा बेफाइदा निम्त्याउन सक्छ।
मानिसअनुसार पनि उसले खाने तेलको प्रकारमा फरक पर्ने हुन्छ, जस्तै; सूर्यमुखी तेल ‘मोनो-अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड र पोली-अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिडको राम्रो श्रोत हो, तैपनि मधुमेह भएका व्यक्तिहरूले सूर्यमुखी तेलको प्रयोग गर्नु एकदमै हानीकारक हुन्छ। किनभने यसले शरीरमा चिनी (sugar) को मात्रा बढाउँछ। तर अवकाडोको तेल र बदामको तेललाई मुटुको लागि राम्रो मानिन्छ किनभने यसमा स्वस्थवर्दक बोसो र चिल्लो पदार्थहरू पाइन्छन्। तथापी, एउटै खानामा थरीथरीका तेलहरू मिसाउनु भनेको सीधै मूर्खता हो भन्न सकिन्छ।
नेपालमा तेलको बारेमा गरिने सबैभन्दा बढी गल्तीहरू
नेपालमा मात्रै होइन, धेरै जसो देशको अधिकांश मानिसहरूलाई यो थाहा नहुन सक्छ कि, कुनै-कुनै तेलहरू उच्च तापक्रममा पकाउनको लागि बनेका हुँदैनन्। यस्ता तेललाई धेरै तताउँदा अक्सिकरण (Oxidation) भएर कार्सिनोजेन्स (carcinogens) जस्ता हानिकारक तत्व पैदा हुन जान्छ। यसले तेलमा भएका पौष्टिक तत्वहरूलाई पनि नाश गर्दछ। त्यसैले यस्तो हुन नदिनको लागि एउटै उपाय भनेको तेलको रङ्ग र त्यसको चिल्लोपनालाई जाँच गर्नु हो। तेल तताउँदा त्यसको रङ्ग परिवर्तन हुन थाल्यो भने जान्नुहोस् कि अब त्यो तेललाई तताउन पुगिसक्यो, त्यसलाई त्यहाँ भन्दा बढी तताउनुभयो भने हानिकारक हुन जान्छ।
नेपालमा अधिकांशले गर्ने एउटै गल्ती भनेको सबैथरीका तेललाई धेरै तताएर खाना बनाउने गर्छन्। तर के त्यसो गर्नु उचित हो? अर्को भनेको धेरै मुटुरोगीहरूले आफ्नो खानाबाट पूर्णरूपमा चिल्लो र बोसोको मात्रा घटाउँछन्, तर के त्यसो गर्नु उचित हो? एक सन्तुलन खानामा कम्तीमा पनि १५ देखि ३० प्रतिशत बोसो र चिल्लो पदार्थ हुनु आवश्यक हुन्छ र स्वस्थ खाने तेल भनेकै चिल्लोको एक मात्र श्रोत हो। त्यसैले आफ्नो खानाबाट चिल्लो पदार्थ हटाउनुभन्दा आफ्नो स्वास्थ्यको लागि उचित तेलको छनौट गर्नु बुद्धिमानी हुन जान्छ।
त्यसैगरी, धेरैले गर्ने साझा गल्ती भनेको एकचोटि पकाइसकेर बाँकी रहेको तेललाई फेरि प्रयोग गर्ने गर्छन्। तेललाई पुनः प्रयोग गर्दा तपाईँ आफैले पनि याद गर्नुभएकै होला, त्यसबाट साना-साना काला कणहरू निस्कने गर्छन्। त्यो कालो कण भनेको कार्सिनोजेन्सको मूख्य श्रोत हो। यसले क्यान्सर जस्तो घातक रोग निम्त्याउँदछ भने शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाएर मुटुको धमनीमा बाधा पुर्याउने गर्दछ।
यदि तपाईँले कुन तेललाई कत्तिको तापक्रममा तताउने भनेर जान्नुभएको छैन भने तेल तताउँदा त्यसको रङ्गलाई ध्यान पुर्याउनुहोस्। तेल तताउँदा त्यसको वास्तविक रङ्गमा परिवर्तन भएपछि त्यहाँ भन्दा बढी तताउनुहुँदैन। यदि तेल तताउँदै गर्दा त्यसबाट धुँवा निस्कन थाल्यो भने अब त्यो तेल हानीकारक भैसक्यो भनेर बुझ्नुहोस्। यसरी धुँवा निस्केको तेलमै खाना बनाउनुभयो भने त्यसले मुटु रोगको साथसाथै मस्तिष्कको रोग समेत निम्त्याउन सक्दछ।
कुनै-कुनै खाना खानाले मुटु रोग लाग्न सक्ने सम्भावनालाई दोब्बर बनाउने गर्दछ, र मानिसहरूले आफ्नो खानेबानीलाई सुधार्न पनि गाह्रो नै पर्छ। त्यसैले आफ्नो खानेबानीलाई सुधार्नको लागि बिस्तारै-बिस्तारै पहल गर्नुपर्छ, खाने मात्रालाई नियन्त्रण गर्दै लैजानुपर्छ। कम क्यालोरी भएको तर प्रशस्त पौष्टिक तत्व भएको खाना बढी खानुपर्छ भने धेरै बोसो भएको, सोडियमयुक्त खाना र चिनीयुक्त खानाहरूलाई बिस्तारै कम गर्दै लैजानुपर्छ। मुटु रोगको खतराबाट बच्नको लागि हामीले स्वस्थ बोसो र अस्वस्थ बोसोलाई चिन्नुपर्ने हुन्छ।
मुटुलाई बचाउन मद्दत गर्ने केही खानाहरूः
1. हरीयो सागपात र सफा फलफूलमा क्यालोरीको मात्रा कम हुन्छ र स्वस्थवर्दक फाइबर पाइन्छ जसले खानालाई पचाउन मद्दत गर्दछ।
2. मुटु रोगीहरूले रातो फल मासु नखानुहोला।
3. मधुमेह र उच्च रक्तचाप भनेको मुटुरोगको पहिलो चरण भएकाले सोडियमयुक्त खाना र चिनीयुक्त खानालाई कम गर्दै लैजानुहोस्।
4. शरीरको मोटोपनालाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुन्छ, त्यसैले कम क्यालोरी भएको र प्रशस्त पौष्टिक तत्व भएको खानेकुराहरूमा जोड दिनुहोस्।
5. मुटु रोगीले मात्रै नभई सबै जनाले बाह्य प्याकेटको र डिब्बामा बन्द गरिएको खानेकुरा नखानुहोस्।
6. शुद्ध गहुँको आँटामा प्रशस्त फाइबर पाइन्छ, त्यसैले आफ्नो दैनिकी खानामा यसलाई मिसाउनु सर्वोत्तम मानिन्छ।
7. गाईभैँसीको दूधबाट बनेको घ्यूमा उच्चमात्रामा बोसो हुने गर्छ, तर बनस्पती घ्यूमा थोरै मात्रामा बोसो हुने गर्दछ। त्यसैले मुटुरोगीहरूले बनस्पती घ्यूको सेवन गर्नु कम हानीकारक हुन्छ। तर यसलाई पनि नियमित नखानुहोस्।
8. धुम्रपान तथा मध्यपानले फोक्सो र कलेजोलाई मात्र नभई मुटुलाई समेत प्रत्यक्स असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले मुटुरोगबाट चाँडै नै आफ्नो ज्यान गुमाउन चाहनुहुन्न भने आजै देखि धुम्रपान तथा मध्यपान जस्ता कुलतबाट टाढा रहनुहोस्।
-नाम, दाम र शक्तिका पछाडि मरीहत्ते गर्ने बानी मुटुका लागि राम्रो होइन ।
Don't Miss it के तपाई दिर्घाउ रहन चाहनुहुन्छ ? दिर्घायु रहन यस्ता खानेकुरा खान एकदमै जरुरी छ
Up Next के हो पुदिना ? बढ्दो गर्मीमा यस्ता छन यसका फाइदा
गुगल को बारेमा केहि रोचक जानकारी
१. गुगल सर्चमा केही कुरा खोज्दा त्यसको नतिजा देखाउनुअघि गुगलले २ सय भन्दा बढि पक्षहरुलाई ध्यानमा राखि खोजी गरिएका विषयका…
औषधीउपचारमा दालचिनी को प्रयोग
नेपालको महाभारत पर्वतीय श्रृंखलामा समुद्री सतहबाट १०० मि. देखि २,५०० मी. उच्च क्षेत्रमा तेजपातको जंगल विद्यमान छ। यो एक सदावहार…
बढ्दाे रूपमा फैलीरहेकाे डेङ्गुबाट कसरी बच्ने ? यस्ता छन उपाय
केही महिनादेखी पुर्वी तराईका जिल्लाहरुमा फैलिरहेको र केही ज्यान समेत लिइसकेको डेङ्गु रोगको बारेमा विस्तारितरुपमा चर्चा गर्नु अत्यावश्यक ठानेर यो…
केहि सामान्य टिप्स जसले तपाइलाई सधै जवान देखिन मदत गर्दछ
जन्म, मृत्यु र शारीरिक वृद्धि विकास प्राकृतिक कुरा हुन् । यसको आफ्नै नियम हुन्छ । समय आएपछि जे हुनुपर्ने हो,…
यसरी हटाउनुस नाकको ब्ल्याक हेड्स, गर्छ कम एकै छिनमा
सुन्दरता भनेको सबैलाई प्यारो हुन्छ । त्यसैले सुन्दर हुनको लागि मानिसहरुले धेरै पैसा खर्च गर्छन। खर्च गरे पछि आफ्नो अनुहार…